Ukukhethwa kwemixholo eyi-10 yasimahla yeWordPress | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMelisa Perrotta | | Idizayini yeMifanekiso, imixholo, Wordpress
Kwinqaku elandulelayo kwizifundo zeWordPress zabaqalayo sichaze ukubaluleka kweli qonga. Namhlanje i-28% yewebhu ziyenziwe kwaye / okanye ziphuhlisiwe kwi-WordPress. Eli nani lothusayo lisenza ukuba sicinge ngamathuba emisebenzi avulekileyo kwintengiso yemizobo.
Ngesi sizathu sithathe isigqibo sokuqokelela I-10 esemgangathweni ephendula imixholo yeWordPress. Zonke ezi zoyilo zibonisa isitayile esihambelana nezona zinto zibalulekileyo zangoku.
Ukufumana le mixholo mihle Cofa kwisihloko. Iya kukukhokelela kwiphepha lokukhuphela. Yonwabele!
4 Imvelaphi yegama lokuqala Stanley
Ildy liphepha elinamacala amaninzi elakhelwe kwinkqubo yeBootstrap. Liphepha iyaphendula ngokwenene, iyashukumiseka kwaye inobuhlobo. Umxholo ugqibelele kwiindawo zentengiso, amaphepha asekhaya, iipotifoliyo kunye neendawo zokuyila.
Umxholo ophakamileyo we-WordPress umxholo kunye noyilo olusebenzayo. Yi itemplate esele ihambele phambili njengoko ineendlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso. Lo mxholo uza neewijethi ezininzi zekhasi lasekhaya ezinokusetyenziselwa ukongeza iphothifoliyo, ubungqina, iiseshoni zeparallax, ulwazi ngemveliso, ukubiza isenzo, nokunye okuninzi.
Ukubonelelwa kweMedZone isitayile seWidget nganye yeWordPress; Oko kuthetha ukuba ungongeza uyilo olwahlukileyo kwiindawo zakho zokukhangela, iikhalenda, amaqhosha kunye nezinye ezininzi. Iwijethi nganye inesimbo esiqhelekileyo sokuqinisekisa ukuba into igqibelele kwindawo yakho.
Imvelaphi yegama lokuqala Stanley
UStanley ngumxholo owakhiwe kwiBootsrap 4 elungiselelwe iWindowsPress. Le template ye-Twitter ivumela ukhetho lokwenza ngokwezifiso kunye nokwenza uhlobo lwesithuba sepotifoliyo. Kuza neempendulo zephepha le-3 kunye noyilo oluphendulayo.
I-Vantage yitemplate eguquguqukayo yemisebenzi emininzi. Amandla ayo kukudityaniswa okuqinileyo phakathi kweeplagi ezinje ngeZakhi zePhepha kulwakhiwo lwephepha eliphendulayo, I-Smart Builder 3 yezilayida ezintle, kunye neWooCommerce ukukunceda uthengise kwi-Intanethi. Le yitemplate yokulungisa ephendula ngokupheleleyo.
Umxholo weSydnety uyilelwe iinkampani kunye nabasimahla abafuna ukufumana ubukho kwi-Intanethi. Ukwenza ngokwezifiso ukhetho kukhulu kakhulu, kunye nokukhethwa kweefonti zikaGoogle, ukulayisha iilogo kunye nokunye. Une isilayidi esipheleleyo sephephaIskimu sokuhambisa sinceda umsebenzisi ukuba alikhangele lonke iphepha. Itemplate iyaphendula kwaye iza nokuninzi kune Iifonti ezingama-600 ezivela kwiifonti zikaGoogle apho ukhetha khona. Ikwayinguqulelo ikulungele kwaye iza neparallax eyakhelweyo.
Imitha yimixholo ephendulayo yeWordPress, enomxholo ococekileyo webhlog. Lo mxholo uxhasa umfanekiso we-cebecera parallax. Ikwadibanisa iinketho zombala kwiphepha lomthengi elikuvumela ukuba ulawule zonke ii-icon kunye nokunxibelelana kwindawo yakho. Ikwavumela ukuba utshintshe uyilo lwephepha lakho usebenzisa i-CSS. Ungabandakanya imvelaphi yesiqhelo, icandelo lephepha lokuqala, indawo yewijethi, njl.
U-Hueman ngumxholo weendawo ezifuna ukungena rhoqo okanye ukulungele iimagazini ezikwi-Intanethi. Yenziwe kwigridi yeekholamu ezine, ivumela ukudityaniswa kokubhaliweyo kunye nokufota, ukongeza ekubeni necandelo elibalulekileyo kunxibelelwano lwasentlalweni.
IMinamaze luguqulelo lwasimahla lomxholo wobuchule obuninzi (iMinamaza Pro). Ingumxholo wengcinga yeshishini okanye indawo zebhlog. Itemplate inoyilo oluphendulayo, olulungiselelwe kwi-retina ye-HD kwaye inepaneli enamandla kakhulu yokukhetha umxholo ekuvumela ukuba wenze utshintsho ngaphandle kokuhlela ikhowudi. Umxholo uza nokulula ukusebenzisa isilayida.
Ukuxabisa yimixholo yeWordPress ilula kwaye ihlambulukile kwaye ifanelekile kwiziza zeshishini, iipotifoliyo, iibhlog, njl. Lo mxholo uxhasa isihloko esenziwe ngokwezifiso, imvelaphi kunye neewijethi, iza neetemplate zephepha kwaye inepaneli yokukhetha ukumisela umbala oyintloko, ilogo yesayithi, isilayida, ibar esecaleni kunye neendidi ze-3 zebhlog. Iyahambelana ngokupheleleyo neeplagi ezidumileyo ezinje ngeFom yoQhakamshelwano 7, iWP PageNavi, kunye neBreadcrumb Navxt.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » imixholo » Ukukhethwa kwemixholo eyi-10 yasimahla yeWordPress
IKernit, ifonti yasimahla ekhuthazwe nguJim Henson omkhulu